गुगल लेन्सको साथ सीधै कम्प्युटरमा हातले पाठ कसरी पार गर्ने ग्याजेट समाचार
हामी गुगलको आयामहरू पहिले नै जान्दछौं, हरेक अर्थमा। एक ग्लोबल टेक्नोलोजी राक्षस जुन सर्च इञ्जिनको लागि जन्मिएको थियो। र त्यो "बावजुद" विश्वको सब भन्दा शक्तिशाली कम्पनीहरु को हिस्सा भए पनि, यसले के काम गरिरहेछ जसले यसलाई ठूलो बनायो। गुगलले यसको खोज इञ्जिनको मोबाइल अनुप्रयोग अपडेट गरेको छ को उपयोग थप्दै नयाँ सुविधाहरूको साथ गुगल लेन्स वास्तवमै चाखलाग्दो
अहिले गुगल लेन्स तपाईंको हस्तलिपि पहिचान गर्न सक्षम छ र हामीलाई प्रदान गर्दछ यसलाई सीधा कम्प्युटरमा पास गर्ने सम्भावना। नोटहरू पार गर्न को लागी कुनै सफा छैन ... के यो पास जस्तो लाग्दैन? गुगल लेन्स छ एक उन्नत एल्गोरिथ्म जुन हस्तलेखन पाठलाई व्याख्या गर्न सक्षम छ, तर कम्तिमा तपाईसँग एउटा सुलभ हस्तलिपि लिनु पर्छ। यदि तपाईंसँग भव्य हस्तलेखन छ र तपाईंको कम्प्युटरमा हस्तलेखन पाठ हस्तान्तरण गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई यसलाई तल वर्णन गर्नेछौं।
1 गुगल लेन्स, कागजात बाट कम्प्युटरमा हात द्वारा तपाईंको पाठ
1.1 कम्प्युटरमा हस्तलिखित पाठलाई Google लेन्सको साथ क्रमशः चरणबद्ध गर्नुहोस्
गुगल लेन्स, कागजात बाट कम्प्युटरमा हात द्वारा तपाईंको पाठ
यदि यो उपकरण मेरो हाई स्कूल वा विश्वविद्यालयको दिनहरूमा रहेको भए, म नोटहरू र कागजातहरू सफा गर्ने घण्टा बचत गर्न सक्थें। निश्चित रूपमा, गुगल लेन्स विद्यार्थीहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण सहयोगी बन्छ। थप र नि: शुल्क मद्दतले हामीलाई अधिक समय उपलब्ध गराउँदछ। सक्छ तपाईंको नोटहरू, नोटहरू वा कम्प्युटरमा अन्तिम परियोजना स्थानान्तरण यति सजिलो कहिल्यै भएको छैन र छिटो। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने यो नयाँ उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसोभए हामी तपाईंलाई चरण-देखि-चरण बताउँदैछौं।
तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो गुगल खोजी अनुप्रयोग अपडेट गर्नुहोस् यो एक धेरै भर्खरको सुविधा हो। गुगल लेन्स खोजी ईन्जिन अनुप्रयोगमा खोजी प्रदर्शन गर्न एक अर्को विकल्पको रूपमा देखा पर्छ। साथै यो आवश्यक छ कि कम्प्युटरमा हामी प्रयोग गर्न लाग्यौं हामीले गुगल क्रोम स्थापना गरेको छ। दुबै भएकोले, हामी कुनै पनि समस्या बिना सजीलै कार्य गर्न सक्दछौं।
कम्प्युटरमा हस्तलिखित पाठलाई Google लेन्सको साथ क्रमशः चरणबद्ध गर्नुहोस्
पहिलो कुरा त्यो हो हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा लग ईन गर्नुपर्नेछ, गुगल क्रोम मार्फत, उस्तै प्रयोगकर्ता खातासँग हामीसँग फोनमा अनुप्रयोग छ। यसैले हामी टेक्स्ट ट्रान्सफर गर्न सक्दछौं जुन हामी स्मार्टफोन क्यामेराले हाम्रो कम्प्युटरको क्लिपबोर्डमा खिच्न लाग्यौं। र यसैले हामी पाठलाई टाँस्न सक्दछौं जहाँ हामीलाई यो चाहिन्छ।
Google लेन्स खुला संग, हामी प्रतिलिपि गर्न चाहेको पाठमा केन्द्रित छौं र हामीले गर्नु पर्छ «text» आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् छविहरूलाई त्याग्नको लागि अनुप्रयोगको लागि, यदि त्यहाँ त्यहि कागजातमा छ भने।
Al पाठ विकल्प जाँच गर्नुहोस्, एल्गोरिथ्म कागजातमा हुन सक्ने सम्भावित छविहरू खारेज गर्दछ। «पाठ on मा क्लिक गरेर, अनुप्रयोगले हामीलाई क्यामेराको साथ फेला पारिएको पाठ देखाउँदछ। यस क्षणमा, स्क्रिनमा ट्याप गर्दै, हामी म्यानुअली चयन गर्न सक्छौं सबै पाठहरू देखा पर्दछन्, वा केवल एक अंश जसले हामीलाई चासो दिन्छ। जब हामीले पाठको चयन गर्यौं जुन हामी पूर्ण रूपमा प्रतिलिपि गर्न चाहान्छौं, हामीले गर्नुपर्दछ क्लिक गर्नुहोस् «सबै चयन गर्नुहोस्»। यो गर्दै हामीसँग गुगल लेन्स क्लिपबोर्डमा पाठ प्रतिलिपि गरिएको छ। अब यो आवश्यक हुन्छ कि «पठाउनुहोस्» त्यो पाठको चयन हाम्रो कम्प्युटरमा ...
जब हामी हाम्रो पाठ छान्छौं र यसको प्रतिलिपि गर्न क्लिक गर्नुहोस्, अनुप्रयोगले हामीलाई नयाँ विकल्पहरू देखाउँदछ। हाम्रो कम्प्युटरमा बनाईएको पाठको चयनलाई स्थानान्तरण गर्न, हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ "कम्प्युटरमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्"। यस तरीकाले हामी गर्न सक्छौं हाम्रो टेबल टोलीमा हस्तलिखित पाठ छ र त्यो हामीले चयन गरेका छौं।
A कम्प्युटरमा प्रतिलिपि गर्नुहोस् on मा क्लिक गरेर हामी सक्षम हुन्छौं उपलब्ध उपकरणहरूको सूची। यसको लागि यो छ आवश्यक त्यो पहिले, हामीले सूचित गरिसकेका छौं, हामीसँग छ गुगल क्रोममा लग इन भयो त्यस्तै खातासँग जुन हामी स्मार्टफोनमा Google लेन्स प्रयोग गर्छौं। यदि हामीले यो यस्तो गरेका छौं हाम्रो कम्प्युटर देखा पर्नेछ जस बीच हामी चयन गर्न सक्छौं.
एक चोटि यो काम सकिसकेपछि, एक सन्देश पर्दामा देखा पर्नेछ जसले त्यो संकेत गर्दै हाम्रो पाठको चयन हाम्रो कम्प्युटरमा पहिले नै प्रतिलिपि गरिएको छ। हामीले स्मार्टफोन क्यामेराको साथ फेला पारेको पाठ पहुँच गर्न सक्षम हुन, हामी केवल «पेस्ट» आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
हामी ब्राउजरमा "टाँस्न" सक्छौं, वा सीधा हाम्रो पाठ सम्पादन कार्यक्रममा। र हामीसँग पहिले नै हाम्रो डेस्कटपमा हस्तलिखित पाठहरू छन्। यो सजिलो र छिटो हुन सक्दैन!
पक्का तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि हाम्रो कम्प्युटरमा हस्तलिखित पाठ स्थानान्तरण गर्न सजिलो हुनेछ। जस्तो कि हामीले सुरुमा उल्लेख गर्यौं गुगल लेन्स विद्यार्थीहरूको लागि ठूलो सहयोग हुन गइरहेको छ। सक्छ कम्प्युटरमा टाइप टाइप बचत गर्नुहोस् सधैं एक ठूलो मद्दत हो। जस्तो हामीले देख्यौं तपाईंसँग केवल सबै भन्दा आधारभूत गुगल उपकरणहरू हुनु पर्छ.
एउटा कार्य जुन तपाईं प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कुनै उन्नत विनिर्देशको आवश्यकता बिना कुनै पनि स्मार्टफोनको साथ। Y कुनै पनि कम्प्युटरको साथ जसमा तपाईसँग गुगल क्रोम ब्राउजर स्थापना गरिएको छ। गुगलले हाम्रो लागि जीवन कसरी सजिलो बनाउँदछ भन्ने अर्को उदाहरण। र यस अवस्थामा नि: शुल्क उपकरणको साथ, विज्ञापन बिना र उत्कृष्ट गुणको। तपाईंले अझसम्म तिनीहरूको प्रयास गर्नुभएन? तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ यो कसरी गर्ने।
इन्स्टाग्राममा निर्बाध पनोरमिक फोटो कसरी पोष्ट गर्ने भनेर एक झलक हेर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » गुगल लेन्सको साथ तपाईंको कम्प्युटरमा हातले पाठ कसरी पार गर्ने
नमस्कार सुरक्षाको पक्षमा तपाई टिप्पणी गर्न चाहानुहुन्छ। के गुगलले हाम्रो लेखनको उपचार गर्दछ? म डराउँछु कि यो आवाज पहिचान जस्तै हो (उदाहरणका लागि, सामसु'sको स्वोइभस, जहाँ तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो भ्वाइस भण्डार गर्न अधिकार दिनुपर्दछ, यदि होईन भने तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न)।
हामी पहिले नै जान्दछौं कि गुगलले तपाईको जीमेल ईमेलमा संलग्न छविहरू ओसीआर गर्दछ। तपाईंको हस्तलेखन प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई के रोक्छ?